Misy fiatraikany amin'ny fifantenana voajanahary sy fivoaran'ny zavamananaina ny fiovan'ny toetrandro | Fanavaozana maintso
Misy fiatraikany amin'ny fifantenana voajanahary sy ny fivoaran'ny zavamananaina ny fiovan'ny toetrandro
Ao amin'ny tontolo iainantsika, ny zava-manan'aina rehetra dia manaraka ny fizotran'ny antsoina hoe fifantina voajanahary. Ity dingana ity no manapa-kevitra hoe iza avy amin'ireo fototarazo no tena mahasoa ny fiveloman'aina ary miteraka "fanatsarana" amin'ny fampifanarahana.
Ny fiovan'ny toetr'andro sy ny voka-dratsiny manerantany Mety hisy fiantraikany amin'ny fizotran'ny fifantenana voajanahary koa io, ka mahatonga ny làlam-pivoaran'ny evolisiona samihafa hovaina.
1 Inona no atao hoe fifantenana voajanahary?
2 Safidy voajanahary sy fiovan'ny toetrandro
3 Nihena ny rotsakorana ary nitombo ny haintany
4 Fiovana eo amin'ny tontolo iainana
Inona no atao hoe fifantenana voajanahary?
Raha te hahafantatra tsara ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny fifantenana voajanahary, dia mila fantarintsika hoe inona izany. Ny fisafidianana voajanahary dia ny dingana ampifanarahan'ny karazan-javaboary iray amin'ny tontolo iainany. Ny fanovana evolisiona dia entina rehefa misy olona manana toetra manokana manana fahavelomana na tahan'ny fitomboana ambony kokoa noho ny olona hafa ao amin'ny mponina ary mampita ireo toetra ara-pirazanana azo zahana amin'ny taranany ireo.
Ny genotype dia vondrona zavamananaina izay mizara karazana fototarazo manokana. Noho izany, raha tsorina, ny fifantenana voajanahary dia ny fahasamihafana tsy miova amin'ny fiainana sy ny fiterahana eo amin'ireo karazana genotypes samihafa. Io no azontsika antsoina hoe fahombiazan'ny fiterahana.
Safidy voajanahary sy fiovan'ny toetrandro
Fianarana iray navoaka tao amin'ny diary Science navoaka tamin'ny herinandro lasa teo dia milaza fa ny fiovana manerantany amin'ity fizotry ny fisafidianana voajanahary ity dia tarihin'ny orana bebe kokoa noho ny mari-pana. Satria ny fanovana ny toetrandro dia manova ny fitondrana rotsakorana amin'ny sehatra manerantany, mety hisy fiatraikany amin'ny fizotry ny fisafidianana voajanahary koa io.
Na dia voarakitra an-tsoratra tsara aza ny vokatra ara-tontolo iainana amin'ny fiovan'ny toetr'andro, ny vokatry ny toetrandro amin'ny fizotran'ny fivoarana izay mitarika ny fampifanarahana dia tsy fantatra ”, hoy ny lahatsoratra navoaka tao amin'ny Science.
Satria asa sarotra be io, dia tsy maintsy nandeha ny mpahay siansa ary mampiasa tahiry lehibe iray izay ao ambadiky ny fandinihana natao tao anatin'izay folo taona lasa izay. Ao amin'ity tahiry ity dia misy ny fanadihadiana natao momba ny isan-karazany ny biby, ny zavamaniry ary ny zavamananaina hafa, ary koa ny fahafahany miaina sy miteraka.
Nihena ny rotsakorana ary nitombo ny haintany
Ny iray amin'ireo miovaova izay misy akony amin'ny safidin-janahary dia ny fitondrana orana. Raha mihena izy ireo, dia mihabe ny haintany, na amin'ny fotoana na amin'ny matetika. Avy eo, ny fitomboan'ny haintany dia mahatonga ny faritra maro ho lasa maina sy tonga efitra mihitsy. Na izany aza, any amin'ny faritra hafa, mitombo ny rotsakorana ary mety misy tranga izay lasa faritra mando kokoa ny faritra.
Na ahoana na ahoana, misy fiantraikany amin'ny lamin'ny fifantenana voajanahary izany. Izany hoe, ny fivoaran'ny karazan-javamananaina samy hafa dia voakasik'izany satria tsy ny génétien ny karazany ihany no miova, fa ny ozatra ivelany (ny toetrandro). Ny fiovaovan'ny toetr'andro, toy ny fiakaran'ny maripana, ny fitondran'ny rivotra, ny rotsakorana sns. Misy fiantraikany amin'ny fanovana azon'ny zavamananaina samihafa vokatry ny fizotry ny fisafidianana voajanahary.
Fiovana eo amin'ny tontolo iainana
Ao amin'ny tontolo iainana dia mety misy fiovana maharitra izay mety hananan'ny karazana karazany "margin" hampifanarahana sy hianarana miaina manoloana ny tranga vaovao. Ohatra, ny fiovana amin'ny lamin'ny orana dia mety hisy fiantraikany amin'ny loharanon'ny sakafo avy amin'ny zavamananaina isan-karazany. Izany hoe, ny karazan-karazany miankina amin'ny sakafo sasany, toy ny ahitra, dia mety hisy fihenan'ny rakotra zavamaniry noho ny fihenan'ny rotsakorana.
Izany no antony maha-zava-dehibe ny fahalalana ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro sy ny fahafantarana ny fifandraisany amin'ireo fizotran'ny fivoarana voajanahary voajanahary hahafantarana ny fiovana eo amin'ny fiasa eo amin'ny tontolo iainana. Noho ny zava-misy ao anatin'ny fotoana fohy dia antenaina ny fitomboan'ny rotsakorana be izay mety hitarika fiovana lehibe eo amin'ny lamina fifantina.
Araka ny efa nanamarihako teo aloha, miankina amin'ny hafainganan'ny hafainganan'ny fiovan'ny tontolo iainana. ny karazany dia mety mifanaraka amin'ny toe-javatra vaovao na tsia. Na izany aza, ny tsy azo lavina dia ny fiovaovan'ny toetr'andro manana ny tanjaka mety hanovana ny fampifanarahana zavamananaina manerantany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Misy fiatraikany amin'ny fifantenana voajanahary sy ny fivoaran'ny zavamananaina ny fiovan'ny toetrandro
ny taloha haha dia hoy izy:
misy gazela miditra ao amin'ny vatan'ny hafa, marina indrindra amin'ny sary voalohany
Valio ny taloha haha